Rakkoo nageenyaa Walloofi Shawaa Kaabaatti mudateen 'namoonni 80,000 ol buqqa'an' - BBC News Afaan Oromoo
Rakkoo nageenyaa Walloofi Shawaa Kaabaatti mudateen 'namoonni 80,000 ol buqqa'an'
31 Bitooteessa 2021
Madda suuraa, KOMINIKEESHINII AANAA JIILLEE DHUMMUUGAA
Lola torbee tokkoon dura naannoo Amaaraa Godina Shawaa Kaabaafi Godina Addaa Saba Oromootti mudateen namoonni hedduun lubbuu dhabuun hedduunis qe'eerraa buqqa'aniiru.
Iddoowwan lolli kuni itti adeemaa ture keessaa godina addaa Saba Oromoo keessatti kan argamtu aanaan Jiillee Dhummuugaa ishee tokko.
Bulchaan aanichaa Obbo Jamaal Hasan BBC'tti akka himanitti, lola aanichatti torbee tokkoo oliif tureen gandootni aanichaa hedduun abiddaan gubachuun namootni kuma 40 tahan qe'eerraa buqqa'aniiru.
"Rakkoo hamtuu keessa jirra. Akka aanaa keenyaatti namni 40,000 buqqa'ee jira.
Kan ragaa of harkaan geenye: namni 67 du'e, namni 114 madaa'eera. Gandoota saddeet keessaa manneen 815 gubatan," jedhan.
Namoonni madaa'an kunneenis, sababa ammaan dura Hospitaala keessatti namoonni sababa eenyummaa isaanitiin ajjeefamanii turaniif, sodaa sanarraa kan ka'e yaala gahaa argachaa akka hin jirres himan.
Walitti bu'iinsa Walloo, gaaffii miseensota paarlaamaa fi deebii MM Abiy
'Qotee bulaadhaani kan wal lolamaa jiru'-Bulchaan Aanaa Jiillee Dhummuugaa
Bulchaan Godina Shawaa Kaabaa (Naannoo Amaaraa) Obbo Taaddasaa Gabretsaadiq gamasaaniin rakkoo dhalateen namoonni lubbuu dhaban hagam akka ta'an hanga yoonaa akka hin beeknee fi kanneen buqqa'an garuu 41,000 kan caalan ta'uu himan
''Lakkoofsa namoota du'anii hagam akka ta'e gareen qoratu bobbaafamee qorannaarra jira.
Kanneen buqqa'an hanga ammaa kan harka keenya gale garuu naannoo namoota 41,600ti. Kanneen mana firaatti baqatanii jiranis waan jiraniif lakkoofsi kun dabaluu danda'a.''
Namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an kunneenis rakkoo hammaataa keessa jiraachuu eeran Obbo Jamaal.
"Uummata buqqa'e kanaaf hanga ammaatti namni gargaarsa fideef homtuu hin jiru. Qotee bulaan ofumasaatii waan qabu walitti guuree walgargaaraa jira. Qaamni mootummaa maal keessa jirtan jedhee gaafatus hin jiru. Garuma rabbiitti iyyachaa jirra." jedhan
Obbo Taaddasaan ammoo rakkoo dhalate booda koree furmaata fidu tokko hundeessuun, lammiilee kunneen akka deggeraman hojjechaa jirra jedhan.
''Shawaa Roobit, Axaayyee fi Efraataa keessatti nyaata dhiyeessurraa eegalee gargaarsi adda addaa namoota miidhamaniif kennamaa jira. Hojiin tasgabbii uumuus hojjetamaa jira.''
Haata'u malee tibbanas naannoowwan kanneen akka Axaayyee, Maajatee, Dhummuugaa fi kaan keessatti dhukaasi dhagahamuu hin dhiisne jedhan Obbo Taaddasaan, kunimmoo hawaasa keessatti sodaa guddaa uumeera jedhan.
''Darbee darbee dhukaasi ni jira. Har'umallee Efraataa Gidim keessa dhukaasi tureera. Dhukaasa nama rifaasisuuf dhukaafamuudha. Raayyaan Ittisa Biyyaa bakka dhukaasi kun dhukaafame deemuun akka ilaale quban qaba.''Obbo Jamaal gamasaaniin uummanni qe'eesaarraa buqqa'e manneen barnootaa fi masjiida, akkasumas iddoowwan garagaraatti faca'ee qubatee jira jedhan.
Haala amma aanaa isaanii keessa jiru yeroo himanis, "Dhukaasni rasaasaa dhaabbatee jira. Ta'usimmoo waraanni naannawa keenya kana marsee qubsiifamaa jira. Waan kuni qophii lolaa waan fakkaatudha.
Humnoonni addaa naannoo Amaaraas aanaa keenya keessaa bakka hin bahintu jira. Bakki hanga ammaa reeffa kaasuun hin danda'amnes jira. Haalli jiru ammas yaaddessaadha," jedhan.
Naannoo Amaaraa magaalaa Axaayyeetti haleellaa raawwatameen lubbuun namaa darbe
'Liyyuu Haayilii Naannoo Amaaraatu waraana nurratti bane'
Akka Obbo Taaddasaan himanitti ammoo namoonni buqqa'an kunneen Shawaa Roobit, Ganda Wuhaa, Efraataa, Axaayyee, Mahaalmeedaa, Dabrabirhaan fi naannawa kanatti faffaca'anii qubatanii jiru.
''Sababa walitti bu'iinsa kanaan tajaajilli geejjibaa gufatee kan ture amma deebi'us, garuu darbee darbee dhukaasni waan jiruuf sodaa guddaatu jira, kanaaf ammoo qaamni nageenyaas eegumsa gochaa jira,'' jedhan Obbo Taaddasaan.
Rakkoo amma mudateef hawaasni furmaata waaraa barbaada kan jedhan Obbo Taaddasaan, furmaati kunis kan dhufu marii fi waliigaltee hawaasaatiin jedhan.
''Gama keenyaan garee rakkoo qoratee adda baasu galchinee jirra. Naannoonis garee tokko ergeera. Kanaafuu gareen naannoorraa ergame godinaalee waldhaban lameen waliin ta'uun furmaata waaraa ni fida jennee abdanna.''
23 Bitooteessa 2021
21 Bitooteessa 2021
Jiraattotni Godina Addaa Saba Oromoo Naannoo Amaaraa Liyyuu Haayilii naannichaatu waraana nurratti bane jedhan
8 Ebla 2019
Naannoo Amaaraa magaalaa Axaayyeefi naannawaasheetti haleellaa raawwatameen lubbuun namaa darbe
20 Bitooteessa 2021
Qeellam Wallaggaatti hidhattoonni 'lammilee irratti dhumaatii raawwatan' - MM Abiy Ahimad
'Ijoollummaan biyyaa ba'een mooraa baqattootaa keessatti ijoollee jaha horadhe'-baqataa Itoophiyaa Kaakumaa jiru
Humni waraanaa Yugaandaa finciltoota Tigraay leenjisuu waakkate
Yeroo dhuma kan haaromfame: 20 Adooleessa 2019
Mohammad Saalaa ilaalcha namoonni amantii Islaamaa irratti qaban akkamiin fooyyeesse?
Dubartoota Itoophiyaa miidiyaalee hawaasaa Chaayinaarratti ‘rakasa’ jedhamuun dhiyaatan
Lubbu-qabeeyyii xixiqqoo fuula keenyarratti saal-qunnamtii raawwatan jiraachuu beektuu?
Kaansarii dhuka lafee: Gosa kaansarii mallattoonsaa dhukkubbii dugdaa ta’e beektuu?
Chaayinaan Taayiwan irratti waraana banuun waan hin oolledha - US